Gobol Maraykanka ku yaalla oo lagu sii daynayo 750 milyan oo kaneeco hidde-sidkeeda la macmalay & waxa ay qabanayso (Muran ka taagan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Gobol Maraykanka ku yaalla oo lagu sii daynayo 750 milyan oo kaneeco...
Gobol Maraykanka ku yaalla oo lagu sii daynayo 750 milyan oo kaneeco hidde-sidkeeda la macmalay & waxa ay qabanayso (Muran ka taagan)
(Florida) 22 Agoosto 2020 – Boqollaal milyan oo ah kaneeco hidde-sidkeeda la macmalay ayaa lagu sii daynayaa gobolka Florida, wax noqonaya daraasad nooceeda ah middii ugu horreeysey Maraykanka.
Hay’adda Xakamaynta Kaneecada (FKMCD) ayaa ogolaatay qorshahan lagu sii daynayo kaneeco aan waxba qaniinayn, iyada oo tijaabada oo dhacaysa 2022 lagu bilaabayo degmada Monroe County.
Hay’adda Center for Food Safety oo ah hay’ad u ololaysa degaanka iyo danaha dadwaynaha oo mashruucan diiddan ayaa sheegtay in lasii daynayo 750 milyan oo kaneeco oo ”caano ma daadshayaal ah.”
Yeelkeede, qorshahan oo ay ogolaadeen Hay’adaha heer Federaal ee Ilaalinta Degaanka (EPA), iyo Xakamaynta & Kahortagga Cudurrada (CDC), iyo Hay’adda Caafimaadka Florida ayaa qabanaysa howl gaar ah oo lagu yaraynayo tirada kaneecada oo ku badan gobolkaas biya-baxada ah, sida ay sheegtay Nathan Rose oo ka tirsan Oxitec oo howshan fulinaysa oo la hadashay Newsweek.
Maxay tahay sababta loo adeegsanayo kaneecadan?
Nooc ka mid ah gacalooyinka duula oo la yiraahdo Aedes aegypti waa nooc kaneecada ka mid ah oo ay qaniinyadeeda ku faafaan cudurro ay ku jiraan dengue, yellow fever, chikungunya iyo Zika, waxayna ku tarantaa meelaha laga heli karo biyaha aan moowjadaha lahayn ee fadhiya oo ku badan Florida, FKMCD ayaa sidaa sheegtay.
Waxaa dheer in lagala quustay buufintii kaddib markii ay la qabsatay dawooyinkii cayayaan dilaha ahaa, sidaa darteed, kaneecadan hidde-sidkeeda la macmalay ayaa loogu tala galay in marka ay la fal gasho kaneeco dheddig ay kaliya dhasho lab, sababtuna waxay tahay in ilmaha dheddig ee ay dhali lahaayeen aanay dhaafaynin marxaladda caydiga oo ay yaraanta ku dhimanayso.
Waxaa intaa dheer, in kaneecada dheddig ay dhiigga jaqdo si ay u kobciso ukumaha uurkeeda ku jira, halka midka labka ihi uu cabo dhabaqa ubaxa, sidaa darteed, cudur ma faafiyo.
Sida ay qabto FKMCD, waxaa habkan lagu xakamaynayaa kororka tirada kaneecada faraha ba’an ku haysa gobolkaasi, iyadoo mashaariic noocan ah horay looga hirgeliyey Cayman Islands, Panama iyo Brazil.
Ha yeeshee, dad badan ayaa diiddan in Maamul-goboleedka Florida uu malaayiin doollar ku bixiyo wax ku sheegeen ”Jurassic Park experiment” oo ah eray laga soo qaatay filin mala awaal ah, jeer uu gobolkaasi ka mid yahay meelaha uu la degey cudurka karoonaha, waxaana la wareejinayaa codsi ay saxiixeen in ka badan 230,000 oo qof oo looga horjeedo.
Previous articleMW Deni & Axmed Madoobe oo soo saaray qoraal ay ku inkirayaan Gobolka Banaadir (Sadarrada dhexdooda)
Next articleImaaraadka oo ku kaliyoobey heshiiska Israel (Dalalkii aadka ugu dhowaa oo diidey inay jidkiisa raacaan)